Bài Thơ Dừa Ơi – Ca Ngợi Tinh Thần Chiến Đấu Của Nhân Dân | Anybook.vn - Anybook
Bài Thơ Dừa Ơi – Ca Ngợi Tinh Thần Chiến Đấu Của Nhân Dân | Anybook.vn
Oh voaniho dia tononkalo mahazatra an’ny poeta Le Anh Xuan. Matetika izy no manoratra momba ny ady sy ny fireneny. Miaraka amin’ny penina tononkira, miditra moramora ao am-pon’ireo mpamaky tia tononkalo ny tononkira. Ny tononkalo Coconut Oi dia asa malaza ary mbola manan-kery hatramin’izao. Nindramina ny sarin’ny voaniho ny mpanoratra mba hiderana ny toe-tsaina miady sy ny sitrapon’ny mponina any atsimo amin’ny ady amin’ny ady amin’ny Amerikana mpanafika.
Any! Andao izao, hiaraka hahatsapa ny heviny amin’ny tononkalo ao amin’ny tononkalo Coconut Oi!
– Le Anh Xuan (1939-1968) dia teraka Ca Le Hien, teraka tamin’ny 5-6-1940 tao Chau Thanh, faritanin’i Ben Tre, tao amin’ny fianakavian’ny mpampianatra tia tanindrazana. Tamin’ny 1952, i Le Anh Xuan dia nianatra sy niasa tao amin’ny trano fanontam-pirinty tao amin’ny faritra misy ady amin’ny fanoherana ny Frantsay.
– Tamin’ny 1954, Le Anh Xuan dia nanaraka ny fianakaviany nankany Avaratra.
– Rehefa avy nahazo diplaoma tao amin’ny Departemantan’ny Tantara ao amin’ny Oniversiten’i Hanoi ary taorian’ny fotoana fohy niasany ho mpampianatra mpanampy tao amin’ny sekoly, dia niverina tany amin’ny sahan’ady tany atsimo i Le Anh Xuan mba hiasa amin’ny fampianarana ary avy eo dia nafindra tany amin’ny Fikambanana Liberation Arts.
– Maty tamin’ny 24 Mey 1968 tany amin’ny manodidina an’i Saigon izy nandritra ny fampielezan-kevitra tamin’ny lohataonan’i Mau Than (1968).
– Maneno akoho (tononkalo, 1965)
– Tsy misy izany any Atsimo (1968)
– Nguyen Van Troi (hira lava, 1968)
– Voninkazo voanio (tononkalo, 1971)
– Tononkalo nataon’i Le Anh Xuan (1981)
– Mitazona ny tany (1966)
Poeta Le Anh Xuan dia fantatra ho poeta manan-talenta amin’ny tanindrazany sy ny fireneny. Feno tononkira midera ny hakanton’ny tanindrazany ny tononkalony, midera ny fahavononana hizaka tena sy ny fizakan-tena hitoetra amin’ny tanindrazan’ny mponina any atsimo nandritra ny ady lehibe fanoherana. Ny tononkalony dia mampiseho mazava ny fitiavany ny tanindrazany, izay tian’ny mpamaky maro. Ny tononkalo Coconut Oi koa dia sanganasa nanatona azy akaiky kokoa ny mpamaky
Andao hiaraka hahatsapa ny tononkira sy penina manan-talenta an’i Le Anh Xuan amin’ny alalan’ny tononkalo Dua Oi!
Nihalehibe aho nahita voaniho teo anoloan’ny lalantsara
Ny voaniho dia mampitony ahy amin’ny torimasoko tamin’ny fahazazako
Isaky ny tolakandro, mihaino ny lakolosy voanio maneno eny amin’ny rivotra
Nanontany an’i bebeko aho hoe: “Efa manana voaniho ve ianao?”
Hoy i Bebe: “Fony aho mbola zazavavy
Nahita ny aloky ny voaniho mangatsiatsiaka teo anoloan’ny tokotany
Heniheny masira sy marikivy io tany io taloha
Mangidy isan-taona ny fiainan’ny fahantrana”
Niverina tany an-tanindrazako aho androany
Roapolo taona no mahalala ny masoandro sy ny orana
Lasa i Bebe ary maitso ny ahitra
Eo amin’ny vatan’ny voanio dia misy marika bala fibra.
voanio, voanio! Firy taona ilay olona?
Saingy mbola maitso ny raviny hatramin’izao
Reko ny rivotra fahizay miantso
Ny fikotrokotroky ny ravina voanio na ny feon-tsabatra.
Oh dia ilay poeta Do Chieu
Efa zatra nitanisa tononkalo teo ambanin’io hazo voanio io
Nihevitra aho fa nahita ireo mpikomy nanenjika ny fahavalo
Vao haingana, feno fotaka ny andalana.
Mijoro eo ambanin’ilay hazo voaniho mijoalajoala aho
Manaraka ny laharana misy landy voaniho sy ravina maitso
Mbola mamerovero toy ny tany ihany ny manda
Eo akaikin’ny hady manohitra ny Frantsay nandritra ny taona maro.
READ Bài Thơ: "Thu Điếu" - Nguyễn Khuyến | Anybook.vn
Mbola toy ny zaridaina voanio tany an-tanindrazany
Nahoana no mbola tia kokoa ny foko
Oh, vatana voaniho efa nivoa-dra indroa
Fanaintainana be, lonilony be.
Mbola mijoro tsara ny voaniho
Mbola maitso maitso ny raviny
Fakan-boanio miraikitra amin’ny tany
Toy ny mponina mifikitra amin’ny tanindrazany.
Ny voanio voanio naratra dia tsy miondrika
Mbola miandrandra sy mihira eny an-danitra
Raha latsaka amin’ny voaniho ianao dia aza laniana
Nitsangana indray i Coco ka nanao ny manda.
Ravin-boaniho maitso mamiratra amin’ny masoandro
Araho ny tafika amin’ny ravina camouflage
Raha latsaka amin’ny voaniho izy dia aza laniana
Nirehitra indray ny voaniho tamin’ny fahazavan’ny fanilo hanazava ny lalana.
Maratra mafy ny tanindrazana
Niompy voanio nandritra ny taona maitso
Oh, ny voaniho ve no mitsentsitra ny kitapo mangidy
Mba hamokatra voankazo mamy ho an’ny fiainana.
Henoy ny mozika bitsibitsika zaridaina voaniho
Malahelo be an’i bebeko aho
Fony aho mbola kely dia nisotro rano voanio mamy aho
Fantatro hoe taiza ny fotoana mangidy voalohany.
Mitraka amin’ny lohataona mafana aho
Afaka ny ankilany efatra amin’ny tanindrazana
Nahita tampoka ny dadabeko aho
Toy ny tovovavy iray eo amin’ny roapolo taona eo
Toy ny voaniho eo anoloan’ny tranoko.
Namaky ny tononkalo Cay Dua nataon’ny poeta Le Anh Xuan izahay, niteraka fihetseham-po. Ny sarin’ny voaniho dia hita hatrany amin’ny asany. Le Anh Xuan dia nindrana ity sary ity mba hanehoany ny fangorahany ny tanindrazany sy ny fitiavany ny firenena. Ankoatra izany, mindrana ny sarin’ny voanio mba hiderana ny kalitao sy ny finiavana hifikitra amin’ny tanindrazan’ny mponina any atsimo nandritra ny ady fanoherana an’i Etazonia. Andao hiara-hahafantatra bebe kokoa eto ambany!
Le Anh Xuan no tena anarany dia Ca Le Hien, teraka tamin’ny 5-6-1940 tao Ben Tre. Ny tanàna niaviany dia ao amin’ny kaominina Tan Thanh Binh, distrikan’i Mo Cay Bac, faritanin’i Ben Tre. Teraka ny Profesora Ca Van Thinh, mpampianatra malaza sy mpikaroka momba ny haisoratra. Nihalehibe tao amin’ny fianakaviana manan-tsaina tia tanindrazana manana fomba amam-panao literatiora i Le Anh Xuan, tamin’ny fahazazany.
Le Anh Xuan dia tia ny tanindrazany toy ny tena tia olon-tiana. Nafana fo sy reharehany ny hazo voanio, ny renirano sy ny Ben Tre, ny toerana nisy ny orana sy ny rivotra, ny herim-pon’ny olona tao amin’ny tanindrazany misy nosy telo. Izay fitiavana rehetra nambarany tamin’ny alalan’ny tononkalony.
Ben Tre, ambanivohitra malaza amin’ny voaniho. Ny hazo voanio no fanahy sy tandindon’ny mponina amin’ity tany ity. Eo amin’ny andavanandrom-piainan’ny mponina amin’ny maha zava-dehibe azy izany. Sakafo voanio no andrahoina ny vary mamy sy manitra. Ny fanilo ravinkazo mafana dia manala ny haizin’ny lalana ambanivohitra. Ireo izay mandeha lavitra ny trano dia maniry mafy ny hihinana sakafo matavy misy fofon-boaniho: trondro kodia voatono amin’ny ronono voanio miaraka amin’ny anana manta, patsa avy amin’ny renirano natsatsika tamin’ny ronono na lasopy feno hanitra avy amin’ny hazo fihinam-boa Ben Tre, voanio, akondro, sns, jackfruit, ovy,….Voany voanio no manao tetezana miampita renirano sy lakandrano; manao andry, tady, rairainy, fandriana, seza, … ao an-trano.
READ Bài Thơ: "Tre Việt Nam" | Anybook.vn
Manamboara fandriana, siny mamatotra, ombidia mamatotra, sns. Na avy any amin’ny faritra Afovoany ny voaniho na tonga any amin’ny nosy lavitra, ity firenena ity dia mbola toerana tsara indrindra amin’ny toe-piainan’ny hazo voanio. Hatramin’ny nahatongavan’ny voaniho ho marika tsara tarehy sy malala, dia niditra tononkalo sy mozika. Le Anh Xuan koa dia manana fitiavana manokana amin’ny voaniho. Tamin’ireo tononkalo enimpolo natao pirinty dia nisy telo niaraka tamin’ny voaniho no lohahevitry ny lohahevitra (Fahatsiarovana ny voanio, oi voanio, fanilo ravina voanio) ary niseho imbetsaka tamin’ny tononkalo hafa ny voaniho. Ny voaniho dia toy ny sakaiza malalany mba hatokisany azy:
“Vanio, voaniho! Firy taona ilay olona?
Ny fikotrokotroky ny voaniho ve sa feon-tsabatra?
Ho azy, na dia misy ny teny hoe “fahiny” aza ny voaniho, dia “vaovao sy maitso” hatrany, feno fiainana. Ny voaniho ho vavolombelon’ny tantaran’ny fampitana ny fomban-drazana miady amin’ny fitazonana ny firenena amin’ny vahoaka voanio ho amin’ny taranaka fara aman-dimby. Ny fitambarana tononkalo faharoa nataony, Le Anh Xuan mitondra ny anarana hoe Voninkazo voanio, rehefa nomen’ny olona ny anaran’ny olon-tiany voalohany na ny namany akaiky indrindra ny zanany. Folo taona tany Avaratra, tao anatin’ny alahelon’ny tanàna niaviany, dia nalahelo mafy ny voaniho izy
Ny nostalgia ho an’ny tanindrazany dia ao am-poko foana, mandeha mandritra ny andro: vao maraina, mitataovovonana ary alina. Ny habaka amin’ny nostalgia dia ny lanitry ny tanindrazany izay rakotra hazo voanio maitso foana. Toa ny voaniho no sary voalohany tonga ao aminy isaky ny malahelo ny tanindrazany. Tsy manoratra momba ny voaniho amin’ny ankapobeny izy fa tena voafaritra. Angamba tsy maintsy mipetraka any ambanivohitry ny voanio ianao vao mahita ny mahasoa ny voanio. Tsy nanadino ny fampiasana voanio i Le Anh Xuan. Voalohany indrindra, nanaloka ny tokontany ny voaniho, izay nampitony ny torimason’ny fahazazana nandritra ny taranaka maro:
“Nihalehibe aho nahita voaniho teo anoloan’ny lalantsara
Isaky ny mihaino ny lakolosy voanio aho maneno eny amin’ny rivotra
Hoy i Bebe: “Fony aho zazavavy
Nahita aloky ny voaniho mangatsiatsiaka teo anoloan’ny tokotany aho.”
Noho izany, ny voaniho dia nampitony ny fahazazan’ny ray, ray, “ny ahy” ary mbola hampandry ny torimaso milamina ho an’ny taranaka maro hafa. Na iza na iza natory teo am-pandriana teo amin’ny lavarangana amin’ny tolakandron’ny fahavaratra mafana, miaraka amin’ny andalana voaniho mangatsiatsiaka any ivelany, dia afaka mahatsapa ny fandrian’ny voaniho – Mangatsiaka, mahasalama, indraindray lavitra, indraindray akaiky, indraindray ambony ary indraindray ambany. , indraindray toy ny fihomehezana lava, indraindray toy ny fahanginana tampoka ary avy eo dia nifandona tamin’ny rivotra – mba hahatakarana ireo andalana tononkalo rehetra ireo.
Ny voaniho koa dia tafiditra amin’ny asa maro hafa amin’ny fiainana andavanandro. Tamin’ny ady mafy niady tamin’ny fahavalo tao amin’ny tanindrazan’i Dong Khoi, dia nandray anjara lehibe ny voaniho: ny vatan’ny voaniho dia nanangana trano mimanda, nanao ravin-kena, ary natao ho fanilo hanazava ny lalana:
READ Các Bài Thơ Về Thầy Cô | Anybook.vn
« Raha latsaka amin’ny voaniho ianao dia tsy ho very maina
Voaniho niakatra ho any amin’ny vatana mba hanorina ny fiarovana.
Manaraka ny trano mimanda dia camouflage
Nirehitra indray ny voaniho ka lasa fanilo hanazava ny lalana”.
Ao amin’ity tononkalo ity, Le Anh Xuan dia tsy maty ny hazo voanio. Teo am-pijoroana tamim-pireharehana, nandao ny manam-pahefana sy mpiady anaty akata ny voaniho. Rehefa miala amin’ny sampany ny ravinkazo, dia mbola mivoady izy fa hampiasa ny vatany ho jiro mafana ho an’izao tontolo izao, ho fanilo hanazava ny lalan’ny revolisiona. Mbola tsy nirodana ireo voaniho naratra, mbola “mitsangana hirehareha eny an-danitra”. Ary raha misy ny fianjerana noho ny baomba manimba ataon’ny fahavalo, dia hitsangana indray ny vatan’ny voaniho hanorina fiarovana mafy, hanohy ny fiatrehana ny baomba sy ny balan’ny fahavalo. Nanamafy ny poeta fa ny voaniho no mariky ny olona Ben Tre:
“Oay, niraraka ra ny vatan’ny voanio
Ohatrinona ny fanaintainana ary hatraiza ny lonilony
Toy ny mponina mifikitra amin’ny tanindrazany”.
Niatrika ady indroa, “nirohondrohona ny basy fahavalo”, ny mponin’i Ben Tre dia nikoropaka tao anaty afo: “Ry anabaviko, nodinihiny izahay, maty ny anadahiko teo amin’ny faha-roapolo taonany”. Mbola nifikitra tamin’ny tany anefa ny mponina tao Ben Tre, nifikitra tamin’ny tanàna, mbola namboly vary sy namboly voanio indray rehefa avy niasa baomba. Niady tamin’ny fanenitra, fandrika volotsangana, sy ny fitaovam-piadiana vitsivitsy, ny tafondro voanio, ny fanilo voanio ary ny fo feno fitiavana ireo reny antitra nitaiza kadre, zanaky ny tany voan’ny fahavalo. ambanivohitra, nanao ny Dong Khoi malaza ny mponina ao Ben Tre…
Ny fitiavana ny tanindrazana no fihetseham-po iraisan’ny firenena; amin’izay fotoana izay ihany koa no tena loharanon’ny aingam-panahy amin’ny tononkalo fanoherana. Avy amin’ny aingam-panahin’io vanim-potoana io ihany koa ny tononkalon’i Le Anh Xuan, saingy mbola manana zavatra tena manokana izy, ka mahatonga an’ity poeta voaniho ity tsy ho diso hevitra miaraka amin’ireo poeta ankehitriny.
Io fomba miavaka io dia ny firaiketam-pony amin’ny toerana izay nanoratana ampahany tamin’ny fahazazany, izay nampifangaro ny taniny tao amin’ny tononkalony ny tsirony miavaka tsy hay hadinoina. Ny vahoaka be herim-po tsy manam-paharoa, ny halehiben’ny Atsimo ary ny firenena no manandratra ny elatry ny fanahin’ny poetika an’i Le Anh Xuan. Ary ny fanahin’ny tononkalony no nanandratra ny elatry ny fitiavako ny tanindrazako. Misaotra anao nandao anay, ho an’ny taranakay, andalana tononkalo mahafinaritra, andalana tononkalo izay azon’ny Ben Tre vakiana ary tena mirehareha amin’ny nahaterahany eto amin’ity tany ity.
Etsy ambony, ny uct.edu.vn dia nizara taminao ny tononkalo Dua Oi nataon’ny poeta Len Anh Xuan. Ny tononkalo miaraka amin’ny teny malefaka dia midera ny toe-tsaina tia ady, miaro ny tanin’ny mponina any atsimo nandritra ny ady nahery vaika nanohitra an’i Etazonia. Maneho ny fitiavany ny tanindrazany koa izy ireo. Ampahatsiahivo ny mpamaky mba hankasitraka sy ho tia ny tanindrazany. Misaotra anao nanaraka ny lahatsoratray!
Previous: Panna Cotta là gì? Cách làm Panna Cotta chuẩn vị Ý tại nhà. | Anybook.vn
Next: Top 9 Trường đào Tạo Ngành Thú Y Hiệu Quả Và Tốt Nhất ở Việt Nam Hiện Nay – Đề án 2020 | Anybook.vn